Pokémon GO dia hitsahatra tsy hanohana ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Pokémon GO dia hampitsahatra ny fanohanany ny Apple Watch
Pokémon GO dia lasa, amin'ny fahamendrehany manokana, iray amin'ireo lalao nahomby indrindra tamin'ny ekôzista finday taona vitsy lasa izay. Rehefa nandeha ny fotoana, ary araka ny nampoizina, dia nitotongana be ny fihorakorahana, na dia amin'izao fotoana izao aza izy io dia mbola ampiasain'ny mpampiasa an-tapitrisany maro isan'andro.
Niantic, mpamorona ity fampiharana ity, dia namoaka kinova ho an'ny Apple Watch tamin'ny Desambra 2016. Amin'ny alàlan'ny fampiharana dia azo atao izany raketo an-tsaina ny fikaroham-batana tadiavinay Pokémon saingy kely kokoa satria tsy inona izany fa ny fanitarana ny fampiharana azo alaina amin'ny iPhone. Ity fampiharana ity dia tsy ho hita intsony manomboka amin'ny 1 Jolay.
Tsy ny olon-drehetra no manana famantaranandro, na izany aza, maro ny mpampiasa mampiasa ny finday findainy manokana hanaraha-maso ny hetsika ara-panatanjahantena. Mba hanomezana tombony ny mpampiasa, ny volana novambra lasa teo dia nanampy ny endrika Adventure Sync, endrika iray izay tompon'andraikitra amin'ny fandraketana ny hetsiky ny mpampiasa, hetsika iray izay voasoratra ho azy ao amin'ny fampiharana Apple Health sy Google Fit, fampiharana iray izay efa hita tao amin'ny App Store nandritra ny volana vitsivitsy ihany koa.
Araka ny filazan'ny mpamorona, amin'ny alàlan'ny Adventure Sync, ny mpanazatra dia manana safidy hanoratra ny diany mivantana amin'ny fampiharana tsy mila mampiasa apps roa tsy miankina, mba tsy terena hampiasa fampiharana roa samy hafa izahay mba hahitana ny fiasa ara-batana efa nataontsika fony izahay nihaza Pokémon.
Ny lalao manaraka azoko averina ny fanovana ny zava-misy virtoaly eo amin'ny tontolo iainana finday dia mety ho Minecraft Earth, fampiharana ho an'ny fitaovana finday ahafahantsika mahita sy manangana eo amin'ny tontolo iainantsika raha mbola hatreto amin'ny lalao amin'ny sehatra rehetra misy azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Pokémon GO dia hampitsahatra ny fanohanany ny Apple Watch
Ankafizo ny mozika rehetra amin'ny Amazon Music 30 andro maimaim-poana